'हाम्रो पात्रो' भाइबरको पब्लिक एकाउण्टमा उपलब्ध भएसँगै, हाम्रोपात्रोले भाइबरमा भएका ब्रान्ड तथा सेलिब्रेटी लगायतका पब्लिक एकाउण्टहरुलाई लक्षित गरेर 'हाम्रो च्याटबोट' नामक 'च्याटबोट' सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथै हाम्रोपात्रो एपमा उपलब्ध लगभग सबै सेवाहरु अब हाम्रो च्याटबोट मार्फत, 'हाम्रो पात्रो'को भाइबर एकाउण्टमा उपलब्ध छ ।
के हो हाम्रो च्याटबोट?
कुनै पनि ब्राण्ड तथा सेलिब्रेटिहरुले भार्इबरमा भएका आफ्ना फलोअरहरूसम्म सहज रूपमा पुग्न तथा दोहोरो सम्वाद गर्नका लागि हाम्रो पात्रोले बनाएको च्याटबोट नै 'हाम्रो च्याटबोट' हो । 'हाम्रो च्याटबोट'को प्रयोगबाट ब्रान्ड तथा सेलिब्रेटिहरुले तत्काल कुनै जानकारीलाई नोटिफिकेशनको रुपमा भाइबरमा पठाउन, च्याट गर्न, भोटिङ वा सर्वेक्षण गर्न, समाचार सम्प्रेषण तथा युट्युब भिडियो प्रशारण गर्न सक्छन् । आफ्नो ब्राण्ड अथवा उत्पादनकालागि आफ्नै ChatBot बनाउन अथवा यसबारे थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने 'Hamro ChatBot' को आधिकारीक वेबसाइट chatbot.hamropatro.com भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ ।
भाइबरमा हाम्रो पात्रो
हाम्रोपात्रो भाइबरमा 'च्याटबोट' प्रयोग गर्ने सम्भवत पहिलो नेपाली ब्रान्ड हो, जहाँ प्रयोगकर्ताहरुले हाम्रोपात्रोसँग दोहोरो सम्वाद गर्न सक्छन् । फेसबुक मेसेन्जरको च्याटबोट तथा गुगल आलोको असिस्टेन्ट सँग दोहोरो सम्वाद गरिरहेका नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले अब नेपाललाई नै लक्षित गरेर बनाइएको हाम्रोपात्रोसँग भाइबरमा कुराकानी गर्न सक्छन् । प्रयोगकर्ताहरुले समाचार, तिथी-मिती, लोड सेडिङ्ग तालिका, राशिफल, मौसम, विदेशी विनिमय दर, सुन-चाँदीको दरभाउ, जनमत आदि टाइप गरि हाम्रो पात्रोको भाइबर एकाउन्टमा यी सबै कुराहरु हेर्न सक्छन् ।
भाइबरमा हाम्रोपात्रो सँग कसरी जोडिने?
भाइबरमा "HamroPatro" सर्च गरी हाम्रोपात्रोको पब्लिक एकाउन्ट फलो गर्न सकिन्छ । अथवा यो लिंक chats.viber.com/HamroPatro मार्फत हाम्रोपात्रोलाई फलो गर्न सकिन्छ । हाम्रोपात्रोलाई फलो गरिसकेपछि, माथि उल्लेख गरिएझैँ टाइप गरेर दोहोरो सम्वाद गर्न सकिन्छ ।
४५ लाख नेपाली प्रयोगकर्ताहरु रहेको भाइबर नेपालमा अत्यन्तै लोकप्रिय मेसेजिङ एप हो । भाइबरले केही महिना देखि नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर नेपालमा लगानी गर्दै आएको छ । फलस्वरुप अहिले भाइबरमा दर्जनौँ नेपाली स्टिकरहरु उपलब्ध छन् । त्यसैगरी १० लाख भन्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरु रहेको हाम्रोपात्रोले आफ्नो एपमा समयानुकुल सुधार र नयाँ सेवा, सुविधा थप गर्दै गइरहेको छ । हाम्रो पात्रो, भाइबरको लागि नेपाली आधिकारिक प्राविधिक साझेदार पनि हो ।
भाइबरमा हाम्रो पात्रोसँग दोहोरो सम्वाद गर्न पाउनु रमाइलो कुरा हो, सबै कुरा एकै ठाउँमा हेर्न सकिने कारण समयको बचत पनि हुन्छ । तत्कालको लागि हाम्रो पात्रो सँग गुगल आलोको असिस्टेन्ट जसरी च्याट गर्न सकिँदैन, भन्नको मतलब भाइबरमा हाम्रोपात्रोले अहिले हामीले सोधेको सबै कुराहरु बुझ्दैन, जवाफ दिन सक्दैन तर समाचार, लोडसेडिङ तालिका तथा अन्य हाम्रो पात्रोमा उपलब्ध सेवाहरुको भने तुरुन्तै जवाफ दिन्छ । हाम्रो पात्रो खोलेपछि, किबोर्डमा आफूले सोध्न सकिने अप्सनहरु देखापर्छ, त्यहाँ देखिएका अप्सनहरु टाइप गर्दा तुरुन्त जवाफ पाइन्छ ।
मैले परिक्षण गर्दा सम्म, हाम्रोपात्रोसँग नेपालीमा च्याट गर्न सकिन्न । हाम्रोपात्रोले 'news' लेखियो भने, नेपाली समाचारहरु देखाइदिन्छ तर नेपालीमा 'समाचार' टाइप गरियो भने, हाम्रोपात्रोले भाषा बुझ्दैन । आशा गर्छु, यी कुराहरु हाम्रोपात्रोले चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्नेछ, अनि चाँडै नै हामीले नेपालीमा बोलेकै भरमा (टाइप नगरी), भाइबरमा हाम्रोपात्रोसँग दोहोरो सम्वाद गर्न सक्नेछौँ । हामीले बोलेर सोधिएको कुरा, हाम्रो पात्रोले बोलेरै जवाफ दिने छ । हाम्रो पात्रो तथा नयाँ हाम्रो च्याटबोटलाई शुभकामना ।
➤ भाइबरमा हाम्रोपात्रो
➤ हाम्रो च्याटबोट